Maitiro Ekusarudza Yekutengesa Yekushandisa Solution | Martech Zone
Maitiro Ekusarudza Yekutengesa Yekushandisa Solution
Chipiri, July 15, 2014 Muvhuro, Mbudzi 9, 2020 Jenn Lisak Golding
Nepo vatengesi vangave vane sarudzo zhinji dziripo panguva ino, mamwe maindasitiri ari kutsvagira munzvimbo yekushandisa kuti hupenyu nemabasa zvive nyore. Munyika ine migero mizhinji, isu hatigone kubata zvese uye izvo zvakare zvinoreva zvakapusa manejimendi mabasa akambomiririra 20% yezuva redu.
Muenzaniso wekutanga weimwe yemabhizimusi ayo ari kutora kusvetuka kukuru munzvimbo yekushandisa iri mukati mekutengesa; zviripachena, Salesforce.com yanga iri mutambi mukuru kwenguva yakareba, asi zvimwe zvinoshandiswa, kunze kweCRMs, zviri kuuya kuchiedza uye kuyedza kuve SaaS mhinduro dzeboka rekutengesa. Chinangwa chemhinduro idzi hachisi chekungoita mashandiro ehurongwa, asi zvakagadzirirwa kuti zvakare zvikupe yakanaka-tsanga analytics izvo zvinogona kupa kutengesa bhizinesi njere (SBI) kupinda:
Kana tarisiro yacho yainge yaitwa.
Iyo tarisiro yacho yaibatanidzwa
Ndedzipi nzira uye cadence inofanirwa kushandiswa kuzadzisa mhedzisiro.
Mutengi wedu uye mutsigiri, Salesvue, anga ari mumwe wemapiyona munzvimbo yekutengesa, uye vakaramba vachibatsira vatengi vavo kuita kuti zvikwata zvavo zvekutengesa zvibudirire. Kubva pamabasa ehutungamiriri kuzviyeuchidzo, software yavo inoita kuti zvive nyore kumatimu ekutengesa kuti atarise pakutengesa pane kuzadza maCRM avo.
Seimwe yeakatanga kutengesa otomatiki mhinduro, ivo vakagadzira infographic pa Maitiro Ekusarudza Yekutengesa Yekushandisa Solution, ichipa rondedzero yakadzama yezvinhu zvekutarisa kana uchiedza kutsvaga SaaS mhinduro kune yako timu.
Iwe parizvino unoshandisa yekutengesa otomatiki mhinduro? Kana zvirizvo, ndeipi? Goverana pfungwa dzako kana zviitiko mune chikamu chemashoko pazasi. Kana iwe uchifarira kudzidza zvakawanda nezve Salesvue, tinya pazasi:
Tags: Content Marketingmutengi ungwaruKushambadzira Infographicskutengesa kushandisa michinakutengesa bhizinesi njerezvekutengesa zvemukatiKugonesa Kugonesakutengesa infographickutengesa infographicsSBI
Maitiro Ekukora Chinangwa Chekukunda muE-Commerce Mutambo
Pressfarm: Tsvaga Vanyori venhau kuti Vanyore NezveKutanga Kwako
Jul 15, 2014 pa 10: 03 AM
Yakakura inforgraphic - ini handina kuziva kuti mukati kutengesa kwaive kuri kuwedzera!